Asenze kube lula ukuqasha abantu, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Asenze kube lula ukuqasha abantu, kuloba uBusi Mavuso
NGICELA iziphakamiso zenu. Izibalo zabantu abangasebenzi ngesonto elidlule ziveze ukuthi isibalo sentsha engasebenzi siwu-65%, okuyinto ethusayo. Kumele sikushintshe loku.
Ngazi kahle ukuthi imithetho yenza kube nzima futhi kubize ukuqasha. Kusewumsebenzi kahulumeni ukuqinisekisa ukuthi kuba lula ukuqasha abantu. Kepha ngiyazi ukuthi ukwenza loko uhulumeni udinga ulwazi kwabasekhaleni lokuqasha.
Njengoba iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) izobonisana nohulumeni ngokufanele kwenziwe ukulungisa le nkinga, ngidinga ulwazi neziphakamiso zenu ukuthi yini engenza kube lula ukuthi niqashe.
Miningi imizamo eyenziwa wuhulumeni ukulungisa le nkinga. Esabelwenimali (esethulwa) ngoFebhuwari, umhlomulo wentela otholakalayo ngokuqasha wanyuswa ngo-50% wafinyelela kuR1 500 ngenyanga, imali yokweseka ukuthi kuqashwe intsha.
Isikhwama sikamengameli sokuqasha sabelwe uR18.4 billion eminyakeni emibili ezayo nokusungula imisebenzi yesikhashana yentsha kanti kunezinhlelo ezimbalwa zokwenza loku. I-Youth Employment Service isungule amathuba emisebenzi awu-75 000 ngokusebenzisana nohulumeni namabhizinisi ukukhuthaza osomabhizinisi ukuqasha.
Zonke lezi yizindlela ezinhle zokungenelela ezisiza izinkulungwane zentsha kodwa kuyacaca ukuthi azanele. Izinkampani ezikwi-formal sector ziqashe cishe abantu abawu-10 million. Ukukhula (komnotho) kwenzeka uma osomabhizinisi benethemba ngekusasa futhi bekwazi ukukhulisa umsebenzi kunokuthi uma kuthenjelwe kubona ukuqasha abantu. Kepha yize kubalulekile ukukhula (komnotho) njengesiqalo kodwa kukhona okumele sikusho ngokwandisa isibalo sabaqashwayo. Uma singakwazi ukunciphisa izindleko ezihambisana nokuqasha singaqinisekisa ukuthi izinkampani ziyasikhulisa isibalo sabaqashwayo.
Ukuntuleka kwemisebenzi ngenye yezinto iBLSA egxile kuzona futhi ngifisa ukuthi sakhele kulezi zinto ezinhle esezenziwe ukungenelela ukuze silekelelane nohulumeni. Ngiyacela nisithinte ngemibono eninayo ngesingakwenza ukuletha ushintsho.
Ngithukile ukuzwa izindaba zokuthi imigomo ewu-12m izolahlwa ngenxa yokuphelelwa yisikhathi. Kungifikele ukuthi manje akusakhalwa ngezinkampani ezikhiqiza imithi namazwe acebile ngokuhluleka ukuhlinzeka i-Afrika ngemigomo, kunaloko sesinesimo sokungakwazi ukusebenzisa loku esinako.
Imizamo yokugoma abantu isabalulekile. Kunabantu abawu-19.4m eNingizimu Afrika asebegome ngokuphelele nokunabangaphezu kuka-70% kwabaneminyaka engaphezu kuka-60.
Kepha isibalo sabagomile ezweni lonke siwu-49% wabantu abadala. Isibalo sabantu abagomayo siyehla njengoba sisanda kuba wu-67 560 ngesonto elidlule, ekubeni ngoSepthemba wango-2021 sake seqa ku-1m.
Kubonakala sengathi sesifike esikhathini lapho lolu bhubhane seluyingxenye yempilo yethu nalapho sizohlale sihlale sibone leli gciwane lishintshashintsha. Umbono wabezempilo emhlabeni uthi sekuyohlale kuhlale kudingeke ukuvuselela umgomo ukuze simelane neziqubu ezintsha.
Ohulumeni sebezilungiselela ikusasa lapho iCOVID-19 isizoba yingxenye yezifo zesifuba ezingahlale zihlale ziqubuke. Sifinyelela lapho kungasathiwa wubhubhane khona uma sesikwazi ukuqagula indlela isifo esihlasela ngayo futhi ososayensi baphezu kokuqhamuka nezindlela zokwenza loku.
Kepha kucacile ukuthi umphumela wokubheduka kweziqubu zangomuso kuzoncipha uma bebaningi abantu abagomile. Ukugoma kumele kube yingxenye yendlela esenza ngayo kwezempilo uma sifuna ukufinyelela kubantu abaningi.
Kumele sizilungiselele ikusasa lapho ukuvuselela umgomo kuzoba yingxenye yempilo yethu futhi kumele kufake wonke umuntu ngisho naleyo miphakathi ehlwempu neyaye isale ngaphandle.
Osomabhizinisi baneqhaza okumele balibambe ngezisebenzi zabo nangokuxoxisana namakhasimende nemiphakathi. Siloku sibambisene nohulumeni emizamweni yokugoma abantu kuze kube yimanje kanti manje sekumele sibonisane ngokuthi ukudlula esigabeni sobhubhane kusho ukuthini futhi iyiphi indlela esingaqikelela ngayo ukuthi sithola imiphumela emihle emphakathini jikelele.
Ngikubheke ngabomvu ukuthi abamabhizinisi nohulumeni babonisane ngaloku.
Inkinga ebhekene nokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika wukwanda kwabantu abadinga ukuqashwa ngaphezu kwamathuba emisebenzi akhona.
Izibalo zokuqashwa kwabantu, iQuarterly Labour Force Survey, ziveza isithombe esibuhlungu njengoba isibalo sabantu abangasebenzi sinyukile ngekota yesithathu sisuka ku-34.9%, saya ku-35.3%.
Ukuba alubambezelekanga uhlelo lokuthuthukisa ingqalasizinda, ukudayisa i-spectrum nezinye izinguquko, imihlomulo efana nokwakhiwa kwamathuba emisebenzi ngabe isiqalile ukubonakala emnothweni.
UMengameli uCyril Ramaphosa akazange ambambathe ngezinkinga zeNingizimu Afrika engqungqutheleni yabatshalimali ngeledlule. Ukhulume iqiniso ngokudinga ukwenziwa nokubalulekile ngoba abatshalimali kufanele bazi ngezinselelo ababhekene nazo.
Indlela engcono yokwenza abatshalimali bakholwe wukuthi uhulumeni uzowenza umsebenzi wakhe wukugudluza izingqinamba ezivimba inqubekelaphambili kwinqwaba yezinguquko eziqhubekayo.
UNksz uBusi Mavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA
Lesi yisikhathi sokuthi intsha ifundiswe amakhono okuzisebenza, kuloba uNtokozo Biyela
Indawo yekhofi enomuzwa omnandi ayeyijwayele phesheya yenza wafisa ukuba nendawo efanayo eNingizimu Afrika. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA